DAAWO YAABKAN: Ciyaartoy Ka Tirsan Manchester United Oo Iska Diiday Inuu Tababarka Sameeyo Ka Hor Ciyaartii Chelsea Iyo Falcelintii Jamaahiirta – Latest Sports News
DAAWO YAABKAN: Ciyaartoy Ka Tirsan Manchester United Oo Iska Diiday Inuu Tababarka Sameeyo Ka Hor Ciyaartii Chelsea Iyo Falcelintii Jamaahiirta
Manchester United ayaa shalay ka badbaadday inay haleesho guul-darradii 8aad ee muddo 10 kulan gudahood ah, waxaana taas kala baxday Juan Mata oo muddo kaddib uu Ole Gunnar Solskjaer fursad siiyey, isla markaana kusoo bilaabay kulankii ay Chelsea barbarraha 1-1 kula galeen Chelsea hoyga Old Trafford.
Manchester United oo kaalinta lixaad ee kala sarraynta horyaalka Premier League ku jirta ayaa waxay afar dhibcood ka dambaysaa Chelsea oo afraad fadhida, halka Arsenal oo shanaad ku jirtana ay laba dhibcood ka dambayso, taasina waxay soo yaraysay fursaddii ay u haysteen inay ku dhamaysan karaan kaalinta afraad xilli dhamaadka ay laba kulan oo kali ahi ka hadhsan yihiin.
Intii aanay bilaabmin ciyaartii xalay, taageereyaasha Manchester United waxa amakaag ku noqotay ficil uu sameeyey mid ka mid ah ciyaaryahannadooda oo iska diiday inuu sameeyo tababarkii iskululaynta ee ciyaarta ay laacibiinta kooxdu ugu diyaar garoobayeen.
Iyadoo asxaabtiisu orod, jimicsi fudud iyo kubbad-ciyaarisba samaynayeen ka hor intii aanay ciyaartu bilaabmin, Martial waxa uu iska dhex taagnaa garoonka, waxaanu u muuqday mid aan diyaar u ahayn kulanka oo dhan, xilli aanu jirin dhaawac haleelay oo warbaahintu ka war haysay, laakiin taas waxa si kale uga jawaabay tababare Ole Gunnar Solskjaer oo gebi ahaanba aan ciyaarsiinin.
Sida uu muujinayo muuqaalka hoose, Martial waxa uu ahaa qof iska dhex jooga garoonka oo caajis ah, waxaana taas ka cadhooday taageereyaasha oo baraha bulshada kaga falceliyey dhaqanka noocan ah.
Taageereyaashu waxay ka dalbadeen tababare Solskjaer inuu go’aan ka gaadho laacibka reer Francer France.
Halkan ka daawo muuqaal kooban: